AMPITOLOVA : Tsy manaiky ny fampidirana am-ponja an’ i Fulgence ny fokonolona ao Bealoy
Nitsangana ny fokonolona ao Bealoy, fokontany Belobaka manameloka ny fampidirana am-ponja ny havany amin’ny tsy rariny. 18 février 2021
Manamarina izy ireo fa tsy olon-dratsy no sady tsy mpiray tsikombakomba amin’ny dahalo i Fulgence sy ireo namany roa naiditra am-ponja. Nanamafy ny sojabe fa tsy mpangalatra io olona io fa nohosoram-potaka. “Mahafantatra tsara an’io havanay nampidirina am-ponja io izahay satria olobe amin’ny tanàna izy io. Nadoboka am-ponja amin’ny tsy rariny ny havanay ireo satria voamarina fa tsy nanao io fanafihana io i Fulgence fa namonjy raharaham-pianakaviana tany Tsararano tamin’ny fotoana nisehoan’izany fanafihana izany ary voamarin’ny sary izany”, hoy izy.
Nanamarina izany ihany koa ny rain’ireo olona nanao fanambadian’ny zanany tany Tsararano fa tamin’ny 10 ora alina vao vita ny fety, ary naman’izy ireo nanao kabary i Fulgence. Tokony hojerenareo Fanjakana akaiky ilay raharaha satria misy porofo, hoy hatrany izy, fa tsy marina ny fiampangana. Olona telo izy ireo no naiditra am-ponja amin’ny tsy rariny, hoy ny fanazavan’ny fokonolona hatrany. Tsy nohenoin’ny mpitsara anefa, tsy natao fanadihadiana akory ny voampanga sy ny vavolombelona, hoy hatrany izy ireo, fa nampidirina am-ponja avy hatrany i Fulgence.
Ny alarobia no nisy fanafihana mitam-piadiana tany Ampitolova ka tokantrano telo no voatafika. Nanara-dia avy hatrany ny fokonolona ka rehefa izany dia nandalo tao Bealoy ny dian-tongotry ny jiolahy, nahazo ny tao amin’ny tokantrano iray tao Bealoy ary mbola nitohy niatsinanana nahazo ny ranobe. Tsy nahefa nanara-dia intsony ireo fokonolona avy any Ampitolova fa ilay tokantrano tao Bealoy no notanan’izy ireo. Rehefa niverina izy ireo dia nisy olona roa niambina teo an-tokotany notanan’ireo fokonolon’ Ampitolova ho dahalo avy hatrany.
Manao antso avo amin’ny mpitsara sy ny tompon’andraiki-panjakana eto Mahajanga ireo sojabe sy ny fokonolona ao Bealoy, indrindra amin’ireo mpitsara vao napetraka tsy ela eto Mahajanga satria nadoboka am-ponja ny alatsinainy teo ireo olona ireo. Teo izahay tamin’ny nametrahana anareo filohan’ny Fitsarana sy mpampanoa lalàna, hoy izy ireo, ary napetraky ny Fanjakana eo ianareo hamerina ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana. Jereo io raharaha io fa misy zavatra tsy mazava, hoy hatrany izy ireo. Efa nomena ny Zandary ny porofo manamarina ny tsy maha-dahalo ireo olona ireo.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1988) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021